Izikhungo Zokuphatha - Izakhiwo Zokuphatha Ezithengiswayo | Franchiseek
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Izikhungo Zokuphatha
Izikhwama Zokuphatha Ezifakiwe
Amasu Okuphathwa Kwamuva
Yini ama-Management Franchise
Izinhlaka zokuphatha amabhizinisi lapho i-franchisee (umnikazi webhizinisi endaweni yabo ekhethekile) elawula ukusebenza kwebhizinisi nabasebenzi bayo, kunokuba benze imisebenzi yansuku zonke.
Inhlaka yezokuphatha izosebenzisa abasebenzi abaningi, kanti abazimele bazophatha laba basebenzi kanye neminye imisebenzi yebhizinisi evela ehhovisi labo eliyinhloko noma ekhaya.
Yimaphi Management Franchise atholakalayo?
Ama-franchise wokuphatha awuwona imboni ye-franchise. Esikhundleni salokho, ukuphathwa kuyindlela yokusebenza kwe-franchise, futhi kubandakanya inani elikhulu lezimboni ze-franchise. Nazi izibonelo ezimbalwa zokuphathwa kwe-franchise…
Ingadi Franchise - awudingi ukwenza noma iyiphi ingadi ngeNgadi Management Franchise. Kulesi simo, uzosebenza usuka ekhaya noma ehhovisi, uphatha ukusebenza kahle kwabasebenzi bakho futhi ukhuthaze i-franchise yakho ngeziteshi ezahlukahlukene zokumaketha. Iqembu lakho labasebenzi lizobe lingaphandle eveni lakho lenza ingadi.
Ukuhlanza amaFranchise - ama-franchise anjenge-Time For You usho ukuthi ungahlanza izindlu noma amahhovisi ngaphandle kokushiya indlu yakho! NjengeFenisha Yokuhlanza Ukuhlanza, ungaqasha ithimba labahlanzayo ukuhlanza izindlu namahhovisi, noma yini umsebenzi odingekayo, ngenkathi uphatha iqembu lakho labasebenzi bokuhlanza.
Izinzuzo Zokuphatha Franchise
Enye yezinzuzo ezibalulekile zokusebenzisa i-management franchise, ngokuya nge-franchise, ongase ungadingi noma yiluphi ulwazi kuleyo nkambu. Isibonelo - ukusebenzisa i-franchise yasekhaya yokunakekelwa esebenza njengebhizinisi lezimali zefenisha - ngeke udinge noma yiluphi ulwazi ekunakekeleni noma emkhakheni wezempilo. Lokho i-franchisor ebingakubheka, kungaba ngamakhono okuphatha aqine kanye nokusebenza kweqembu ngempumelelo. Uma ungaphatha ngempumelelo ibhizinisi nethimba labantu, vele ususendleleni yokuya ekubeni yi-franchisee enhle yenhlaka yezokuphatha.
Enye yezinzuzo zokusebenzisa i-franchise ukuthi uzenzela ibhizinisi, kepha hhayi wedwa. Lapho utshala imali enkulumweni yokulawula, uzothola konke ukuqeqeshwa nokusekelwa okudingayo ukuze uqale indiza. Lokhu kuvame ukufaka izibonakaliso, ukukhetha isiza, ukufakwa kwesitolo (uma kusebenza), imifaniswano yabasebenzi, nokuningi.
Dlulisa amehlo kuhla oluphelele lwe-Management Franchise eF Franchiseek.